China Distal Fibular kpochidoro efere factory na-emepụta | Shuangyang
Distal Fibular kpochidoro efere
Distal Mpụga Fibular kpochidoro efere-m Typedị
Ihe nkedo nkpuchi ahihia nke uzo na-adighi anya bu ihe omuma na profaịlụ, ma uzo ma tinyere uzo ozo.
5. Combi- onu nwere ike ịhọrọ ma kpochidoro ịghasa na cortex ịghasa;
Nkesa mpempe mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ dịpụrụ adịpụ nke egosiputara maka mgbawa, osteotomies na nonunions nke metaphyseal na mpaghara diaphyseal nke distal fibular, ọkachasị ọkpụkpụ osteopenic.
Ejiri maka Φ3.0 mkpọchi mkpọchi, Φ3.0 cortex ịghasa, kwekọrọ na usoro 3.0 usoro ịwa ahụ.
Aka ekpe 8 Oghere
Ntọala 8 Oghere
Distal Posterior Libral Fibular kpochidoro efere-II Type
Ihe nkedo mpempe mpempe na-emechi anya na-egosi ihe na-egosi ọdịdị na profaịlụ anatomic, ma dị anya ma n'akụkụ eriri eriri.
1. Emepụtara site titanium na teknụzụ nhazi dị elu;
Ihe nkedo mpempe akwụkwọ na-eme ka ọkpụkpụ na-aga n'ihu na-egosi maka mgbawa, osteotomies na nonunions nke metaphyseal na diaphyseal mpaghara nke distal fibular, karịsịa na ọkpụkpụ osteopenic.
Ejiri maka Φ3.0 mkpọchi mkpọchi, Φ3.0 cortex ịghasa, kwekọrọ na 3.0 sries ọgwụ ngwaọrụ.
Distal Lateral Fibular kpochidoro efere-III Type
Ngwongwo mkpọchi trauma nke na-adịghị ahụ anya na-egosi ọdịdị ọdịdị na profaịlụ, ma dị anya ma n'akụkụ eriri eriri.
1. Mkpa anodized;
2. Anatomical udi imewe;
3. Emepụtara na titanium na teknụzụ nhazi dị elu;
4. Ọdịdị profaịlụ dị ala na-enyere aka belata iwe anụ ahụ dị nro;
Mpempe akwụkwọ mkpọchi akụkụ dịpụrụ adịpụ gosipụtara maka mgbaji ọkpụkpụ, osteotomies na nonunions nke metaphyseal na diaphyseal mpaghara nke distal fibular, ọkachasị ọkpụkpụ osteopenic.
Ejiri maka Φ3.0 mkpọchi mkpọchi, Φ3.0 cortex ịghasa, kwekọrọ na usoro 3.0 usoro orthopedic.
Mkpọchi mkpọchi ahụ ejiri nwayọ nwayọ mana ọ kachasị bụrụ akụkụ nke usoro ọgwụgwọ taa na traumatology nke dọkịta na-awa nke usoro osteosynthesis. Agbanyeghị, echiche nke mkpọchi mkpọchi n'onwe ya na-aga n'ihu na-nghọtahie na n'ihi ya ọbụna na-ezighị ezi. Na nkenke, efere mkpọchi na-akpa àgwà dị ka onye na-edozizi mpụga mana na-enweghị ọghọm nke sistemu dị na mpụga ọ bụghị naanị na ntụgharị nke anụ ahụ dị nro, kamakwa na usoro ndị ọrụ ya na ihe egwu maka sepsis. Ọ bụ n'ezie karịa ihe "esịtidem fixator"
Ejirila ụdị ọkpụkpụ dị iche iche na nkọwapụta dị iche iche site na saịtị eji eme ihe na ọdịdị anatomical nke ọkpụkpụ na ịtụle ike ike, iji kwado nhọpụta na ojiji nke ndị dọkịta na-awa ahụ. A na-eji ihe eji eme ihe na titanium nke AO kwadoro, nke dabara adaba maka mmezi n'ime nke cranial-maxillofacial, clavicle, limb na pelvis fractures.
A na-eme mbadamba ọkpụkpụ titanium (mkpọchi ọkpụkpụ) ka ọ bụrụ nke ziri ezi, ọkpụkpụ ọkpụkpụ anatomical na ndị a nwere ọkpụrụkpụ na obosara dị iche iche na saịtị ntanetị dị iche iche.
Ebumnuche nke ọkpụkpụ Titanium (mkpọchi efere ọkpụkpụ) ka eji mee ihe maka nwughari na ndozi nke clavicle, aka na ọkpụkpụ ọkpụkpụ na-adịghị mma ma ọ bụ ntụpọ ọkpụkpụ, iji kwalite mgbawa mgbawa. N'ime usoro eji eme ihe, a na-eji efere ọkpụkpụ akpọchi akpọchi ya na nkedo mkpọchi iji mepụta nkwado dị n'ime ụlọ siri ike. The ngwaahịa na-nyere na-abụghị igba ogwu nkwakọ na zubere maka nanị iji naanị.
Na ọkpụkpụ osteopenic ma ọ bụ mgbaji agbaji na ọtụtụ iberibe, ịzụta ọkpụkpụ dị mma na kposara ọhụụ nwere ike imebi. Mkpọchi mkpọchi adịghị adabere na mkpịsị ọkpụkpụ / efere iji gbochie ibu ọrịa ma na-arụ ọrụ yiri nke ahụ ọtụtụ obere mpempe akwụkwọ agụba. N'iji ọkpụkpụ osteopenic ma ọ bụ okpukpu okpukpu kpụ ọkụ n'ọnụ, ikike imechi ihe nkedo n'ime ihe nkuku na-arụ ọrụ dị oke mkpa. Site n'iji kposara mkpọchi na efere ọkpụkpụ, a na-emepụta ihe na-arụ ọrụ.
O kwubiri na enwere nsonaazụ na-enye afọ ojuju site na ndozi nke mkpịsị ụkwụ humerus dị nso na efere mkpọchi. Mgbe ị na-eji ndozi efere maka mgbaji ọkpụkpụ nke ọkwa bụ nke kachasị mkpa. N'ihi nkwụsi ike nke akụkụ, mkpọchi mkpọchi bụ ihe eji arụ ọrụ bara uru ma ọ bụrụ na ọ dị nso nke mgbaji.
Nke gara aga: Otu ụzọ n'ụzọ atọ ubkpọchi efere
Osote: Calcaneal kpochidoro efere
Volar kpochidoro efere-Obere & Nnukwu